Voaporofo tamin’ny fitiliana natao azy fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus i Boris Johnson, praiminisitra anglisy. Izy tenany no nanambara ny vaovao tao amin’ny kaontiny Twitter. Misy soritr’aretina izy ary efa nitoka-ponenana, na izany aza nambarany fa manohy ny asa maha praiminisitra azy, ary mampiasa teknôlôjia toy ny vidéoconférence izy amin’izany. (Jereo Sary Tohiny)
Sary Gasypatriote sy nindramina
Tetsy sy teroa (Jereo Tohiny) (Sary Gasypatriote sy nindramina)
Tamin’ny tatitry ny fivoaran’ny fihanaky ny coronavirus nataon’ny Pr Vololontiana Hanta, mpitondratenin’ny Foibem-pibaikoana momba ny coronavirus io atoandro io, no nilazany fa nisy tranga coronavirus iray vaovao voamarina tamin’ireo fitiliana niisa 223 vita teo anelanelan’ny alakamisy 26 marsa 2020 tamin’ny 8 ora maraina ka hatramin’ny androany mitatao vovonana teo. Nanipika ity sojaben’ny fakioltean’ny fitsaboana eny amin’ny oniversiten’Antananarivo ity, fa tsy isan’ireo olona nandeha fiaramanidina tonga avy any ivelany ity tranga vaovao ity, fa olona teto an-toerana ary viriosy azony vokatry ny fifampikasohana no nahavoa azy.
Namoaka toro-marika tsy maintsy tanterahan'ny orinasa tsy miankina, izay manohy mampiasa ireo mpiasa ao aminy, ny minisitry ny asa: 1- Tsy maintsy miantoka fiara fitaterana ireo mpiasa ny orinasa, ka takiana ny hisian'ny kojakojam-panafody ao anaty fiara, indrindra fa ny fanafody fanasana tanana (gels désinfectants alcoolisés)2- Tsy maintsy hajain'ny mpampiasa ary ampiariny ao ampiasana ny elanelana 1m isaky ny mpiasa, eny hatrany anaty fiara fitaterana.3- Tsy maintsy iantohan'ny mpampiasa takom-bava manara-penitra sy eken'ny sampandraharahan'ny fahasalamana ireo mpiasa tsirairay, ary hajaina ny fanoloana izany matetika ara-potoana.
Gare Routière Maki Andohatapenaka: Nafindra eny ny fakana fahazoan-dalana manokana hivezivezy ho an'ireo fiara
Namoaka fampilazana ny Centre de Commandement Opérationnel COVID 19 - Ivato fa nafindra eny amin'ny Gare Routière Maki Andohatapenaka – Antananarivo ny fangatahana fahazoan-dalana manokana hivezivezy ho an'ireo fiara tsy maintsy miasa mandritra ny « couvre- feu » na ho an'ireo fiara madinika mila mivoaka an'Antananarivo. Misokatra amin'ny 8ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro isan'andro ny birao eny an-toerana.
jeudi, 26 mars 2020 12:47
Julien Lepers: Voan’ny coronavirus, milaza fa mbola reradreraka
Ny 24 marsa 2020 no nanambaran’i Julien Lepers, tamin’ny tambazotran-tserasera Twitter, fa eo ho eo ihany ny fahasalamany ary reradreraka ny vatany noho ny coronavirus, nahazo azy efa sivy andro taorian’ny fanentanana lanonana nataony. Teratany frantsay, mpanentana fandaharana kolotsaina malaza « Question pour un Champion » amin’ny televiziona i Julien Lepers. Mpiahy ny hetsika « Festival des Baleines » mpiseho isan-taona ao Sainte-Marie Madagasikara ihany ko izy. 70 taona ny lehilahy ankehitriny.
Alma Clara Corsini: 95 taona, voan’ny coronavirus tany Italia fa sitrana soamantsara
Alma Clara Corsini hatreto no antitra indrindra tamin’ireo voan’ny tsimokaretina coronavirus tany Italia, nefa sitrana soamantsara. Tamin’ny fiandohan’ity volana marsa ity izy no voamarina fa nitondra ilay tsimokaretina coronavirus taorian’ny fitiliana natao azy. 18 marsa, no nivoaka ny vaovao fa sitrana izy taorian’ny fitsaboana natao azy, voakatra izay nahafaly ny ekipa ara-pahasalamana nandray an-tanana azy tany Modène - Emilie-Romagne. (Jereo Sary Tohiny)
Sary: Andry Rakotondrainibe
Voahodidina mpitandro ny filaminana ny fidirana ny afovoan’Antananarivo androany alarobia 25 marsa, andro fahatelo fihibohana an-trano ho fisorohana ny fihanahan’ny valanaretina coronavirus. Nangadihady teny Analakely sy ny Araben’ny Fahaleovantena. (Sary: Andry Rakotondrainibe‎) (Jereo Sary Tohiny)